Stratis စျေး - အွန်လိုင်း STRAT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Stratis (STRAT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Stratis (STRAT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Stratis ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $41 097 637.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Stratis တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Stratis များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StratisSTRAT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.642StratisSTRAT သို့ ယူရိုEUR€0.543StratisSTRAT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.489StratisSTRAT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.584StratisSTRAT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.72StratisSTRAT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.04StratisSTRAT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč14.18StratisSTRAT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.39StratisSTRAT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.85StratisSTRAT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.897StratisSTRAT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$14.19StratisSTRAT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.97StratisSTRAT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.45StratisSTRAT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹48.08StratisSTRAT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.108.37StratisSTRAT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.88StratisSTRAT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.981StratisSTRAT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿19.97StratisSTRAT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.46StratisSTRAT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥68.4StratisSTRAT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩761.64StratisSTRAT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦247.9StratisSTRAT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽46.99StratisSTRAT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴17.55
StratisSTRAT သို့ BitcoinBTC0.00006 StratisSTRAT သို့ EthereumETH0.00167 StratisSTRAT သို့ LitecoinLTC0.0118 StratisSTRAT သို့ DigitalCashDASH0.00707 StratisSTRAT သို့ MoneroXMR0.00721 StratisSTRAT သို့ NxtNXT50.07 StratisSTRAT သို့ Ethereum ClassicETC0.0946 StratisSTRAT သို့ DogecoinDOGE185.25 StratisSTRAT သို့ ZCashZEC0.00779 StratisSTRAT သို့ BitsharesBTS19.78 StratisSTRAT သို့ DigiByteDGB20.54 StratisSTRAT သို့ RippleXRP2.28 StratisSTRAT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0221 StratisSTRAT သို့ PeerCoinPPC2.13 StratisSTRAT သို့ CraigsCoinCRAIG292.5 StratisSTRAT သို့ BitstakeXBS27.37 StratisSTRAT သို့ PayCoinXPY11.21 StratisSTRAT သို့ ProsperCoinPRC80.55 StratisSTRAT သို့ YbCoinYBC0.000345 StratisSTRAT သို့ DarkKushDANK206.01 StratisSTRAT သို့ GiveCoinGIVE1390.4 StratisSTRAT သို့ KoboCoinKOBO146.25 StratisSTRAT သို့ DarkTokenDT0.591 StratisSTRAT သို့ CETUS CoinCETI1854.13